Ọrịa gastronomy nke Portugal na-enye anyị nri dị iche iche ma na-atọ ụtọ | Akụkọ Njem
na gastronomy nke Portugal dị iche iche o nwekwara ọtụtụ mmetụta. Ọ bụ nri a na-etinye na nri Mediterranean a maara nke ọma, ebe ọ bụ na a na-eji achịcha, mmanụ oliv na mmanya eme ihe dị ka ihe eji arụ ọrụ na mba ahụ dum. Agbanyeghị, nri a sitere na nri Arabic na Spanish. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na anyị hụrụ onwe anyị na mba ebe ị nwere ike iri nri nke ọma.
Na gastronomy nke Portugal dịgasị iche ma nwere mma akụrụngwa nke ahụ na-esi n'oké osimiri abịa. Azụ na azụ azụ dị na nri ha, yabụ ọ bụ gastronomy dị ezigbo mma, yana ụtọ na-atọ ụtọ.
2 Ofe ofe
3 Obere Frenchie
4 Alentjo migas
5 Balacao ọla edo
6 Ahụkarị Efrata
The feijoada bụ nri a na-eri n’obodo niile ma nwekwaa agwa na ezi. E zigakwala achịcha a esiri esi na agwa gaa mba ndị Portuguese, yabụ ọ ga-ekwe omume ịchọta ya na mba dịka Brazil. Agwa nwere ike ịbụ oji, ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara ma bụrụ isi ihe, ya mere aha ya. A na-enyekarị efere ahụ n’ime ite ụrọ, jiri ọdịdị ọdịnala. Na mgbakwunye, enwere ike isoro nri efere osikapa na oroma, ihe ịtụnanya mana nke na-agbakwunye ụtọ ọhụrụ iji gbalịa.
Caldo verde bụ nri ọzọ na-edozi ahụ na nri ndị na-edozi ahụ. Anyị na-eche ihu nri na-atọ ụtọ ejiri poteto ghere eghe na mmiri mmiri na-enye ihe, ebe ọ nwekwara chorizo ​​chorizo, collard greens na yabasị. Ọ bụ ụdị nri a na-ahụkarị nke a na-etinye ya na tebụl mgbe ọ bụla bụ ezumike mba. Na efere ndị dị ka nke a, anyị nwere ike ịhụ na nri Portuguese na-enye anyị mma na ọtụtụ na nri ọ bụla.
Nri Francesinha bu ihe ijuanya nye otutu na ọgaranya. Ọ bụ nri juputara na ya, yabụ enweghị ike iwere ya dị ka ihe ọkụkụ dị mfe. Ejiri a Sanwichi multilayer N'etiti nke a na-etinye ihe dị iche iche, dị ka anụ ma ọ bụ anụ ezi. Sanwichi na-ekpuchi ya na chiiz na-agbaze na ihendori nwere mmetụ nke ose na-agbakwunye gburugburu ya na-agbakwunye mmetụ mbụ. O doro anya na nri ndị Portuguese na-eju ndị nwere ike ịnwale ha anya.
Na mpaghara Alentejo enwere ọtụtụ efere ndị na-ahụkarị. Crumbs bụ otu n’ime ha, ọ na-emekwa ya site n’ite eghe. Iji mmanụ fọdụrụ, a na-eji achịcha eme ihe ma na-etinye ihe niile ọnụ. Ọ bụ ihe ọzọ na efere Portuguese ndị ahụ siri ike.
Balacao ọla edo
Ọ bụrụ na azụ dị na Portugal, ọ bụ cod. Ọnụ ọgụgụ nke efere nwere ike iji ya mee ihe ijuanya cod dị ka isi mgwa ihe. Enwere ike ịkwadebe ya na ude, na salad ma ọ bụ na imi ihe. Osisi ọla edo bụ ihe na-atọ ụtọ. Akwadebe ya site na mma crumbs cod na poteto. Ejiri akwa, oliv ojii, na pasili chọọ ya mma. Ọ bụ otu n’ime efere anaghị echefu mgbe ị ga-aga Portugal.
N'ime gastronomy na-atọ ụtọ Portuguese ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ihe ndị na-ahụkarị nke nwere ike ịnwale iche iche ma ọ bụ na efere. Na pan bụ otu n’ime ha a na-akwadebe ya n’ụzọ ọrụ aka jiri ọka ma ọ bụ ntụ ọka wit. Achịcha ha dị oke mma ma ọ bụghị naanị na-eso ụfọdụ nri, kamakwa iji kwadebe ha, dị ka ọ dị na Fogaça.
El mmanụ olive Ọ bụ ihe ọzọ dị na nri Portuguese. A na-ahụ mmetụta Spanish na Mediterranean na nri ha, ebe a naghị aghọta efere n'ejighị mmanụ oliv. Nke a na-enye ha ekpomeekpo Mediterenian yana ezigbo isi iyi abụba.
Ngwaahịa ọzọ enwere ike ịchọta ngwa ngwa n'akụkụ dị iche iche nke mba bụ chiiz. Na Pọtụiziiiz Ha na-enwe ọmarịcha aha ma enwere ike ịchọta ọtụtụ na mpaghara dị iche iche, na-anabata aha mpaghara ahụ. Chiiz ndị a nwere ike ịbụ Queijo de Évora, Queijo do Pico, Queijo Terrincho ma ọ bụ Queijo Rabaçal na ndị ọzọ. Achịcha ndị a nwere ike iji dị ka nri dị ụtọ yana iji sie nri dị ụtọ.
na azụ dị ezigbo mkpa na nri Portuguese. Ọ bụghị n'efu ka ha nwere ọtụtụ kilomita na kilomita nke ụsọ oké osimiri, na-etinye ọtụtụ ndị n'ịkụ azụ. Anyị ahụworị na cod bụ otu n'ime ihe ndị e ji eme ọtụtụ nri, mana ọ ga-ekwe omume ịchọta azụ ndị na-atọ ụtọ na gastronomy ya, dị ka sardines.
Ọ bụ ezie na azụ na azụ azụ dị mkpa na nri Portuguese, anyị enweghị ike ichefu ya anụ ụtọ. Site na anụ ndị a, a na-eme efere akụkọ ifo, na-egosipụta anụ ezi na sausaji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Portugal » Kpoo gastronomy nke Portugal